FIIRSO: Madaxweyne Kuxigeenka Hirshabeelle Guudlaawe oo ka Farxiyay 2000 Kun Qoys Iyo Deeq la gaarsiiyay | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA FIIRSO: Madaxweyne Kuxigeenka Hirshabeelle Guudlaawe oo ka Farxiyay 2000 Kun...
FIIRSO: Madaxweyne Kuxigeenka Hirshabeelle Guudlaawe oo ka Farxiyay 2000 Kun Qoys Iyo Deeq la gaarsiiyay
Guddiga gurmadka abaaraha Hirshabeelle ayaa maanta gaarsiiyay deeq cunto ah inkabadan labo kun oo qoys oo ku barakacay deegaano ka tirsan degmooyinka Jowhar iyo Balcad.
Deeqdaan oo ka koobneyd Bur, Bariis, Saliid & bacaha roobka laga galo ayaa loo qeybiyay qoysas ka soo barakacay dagaaladii dhowaan ka dhacay degaanada Jameeco Misro ,Kulmis Yaroow Maqdas & Busleey oo ka tirsan degmooyinka Jowhar iyo Balcad.
Gargaarkan cuntada ah ayaa waxaa iska kaashaday guddiga abaaraha Hirshabeele iyo kan Gobolka Shabelaha dhexe waxaana bixinta deeqdaani goob joog ahaa Madaxweyne Kuxigeenka Dowlad Goboleedka Hirshabeelle , Xildhibaano ka tirsan Barlamaanka Soomaaliya , mas,uuliyiin ka tirsan Maamulka Gobolka Shabelaha dhexe & maamulka Degmada Balcad.
Waxgaradka qoysaska loo qeybiyay gargaarka ayaa u mahadceliyay dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaana ka mid ahaa duubka dhaqanka beesha Jareerweyne Suldaan C/rashiid Sheekh Shuceyb oo ku tilmaamay deeqdan inay tahay mid bilow wanaagsan ah.
Guddoomiyaha Maamulka Degmada Balcad Cismaan Xaadoolle ayaa sheegay in deeqdaani maanta ay ka faa,iideyteen ilaa in ku ka badan 2000 oo qoys sidaasi darteedna ay ka codsanayaan Maamulka Hirshabeelle in deeqo horleh la soo gaarsiiyo qoysaskan.
Kusimaha Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabeelle ahna Madaxweyne kuxigeenka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaawe ayaa sheegay in dowlad goboleedka Hirshabeelle ay ku dadaalayaan dib u heshisiinta & dib u dejinta shacabkii deganaa afarta tuulo ee dagaaladu saameeyeen.
Deeqdaan maanta la gaarsiiyay Shacabka tuulooyinkii dhowaan ku gubtay dagaalada Sokeeye ayaa noqaneysa tii labaad ee la gaarsiiyo tan iyo markii colaadu dhacday.